Maxaas: AMISOM Iyo Xoogga Dalka Oo Ka wada hadlay Ammaanka – Goobjoog News
Kulan ay ku yeesheen saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ayaa ka dhacay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiran.
Kulankaan ayaa u jeedkiisa waxaa uu ahaa mid isbarasho ee dhexmarayay maamulka cusub ee degmada Maxaas ciidamada dowladda Fedaraalka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika iyo sidii loo sii xoojin lahaa wadashaqeynta u dhaxeysa ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala magaalda Maxaas .
Gaashaanle dhexe Maxamuud Xasan Ibraahim oo ka mida saraakiisha ciidamada dowladda ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxa ka soo baxay kulanka.
“Kulankii dhacay waxaa uu u dhaxeeyay maamulka degmada Maxaas ee ciidanka AMISOM iyo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliya, waxyaabaha looga hadlay ee muhiimadda lagu saaray marka koobaad waa amniga in laga howlgalo degaanno badan oo hoos yimaado degmadaani, waxaa si doo kale looga hadlay arrimo kale ee ku saabsan sidii dib looga xoreyn lahaa fariisimaha ay Al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka”.
Maamulka degmada Caabudwaaq oo sheegay in ay ku guuleysteen xalinta xiisado degmadaasi ka taagnaa (Dhageyso)
Marocco Oo Diyaarad Dagaalk Ku Weysan Dalka Yemen
Shil Ka Dhacay Muqdisho
5 mg cialis tablets [url=http://viagrawithoutdoctorbest.com]...
cialis vs viagra market share default.asp [url=http://viagra...
can cialis show up in urine test [url=http://viagrawithoutdo...